M/weyne kuxigeenka Somaliland oo ka qaybgalay Daahfurka Daladda Sahamiye oo $500milyan ugu talogashay horumarinta Somaliland | Salaan Media
M/weyne kuxigeenka Somaliland oo ka qaybgalay Daahfurka Daladda Sahamiye oo $500milyan ugu talogashay horumarinta Somaliland
April 7, 2021 | Published by: Hamse
Hargeysa (SM)- Aasaasaha Shirkadda xawilaadda lacagaha ee Worldremit Ismaacil Axmed ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daahfuray Dalladda Sahamiye oo ah urur samafal oo diiradda saaraya sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha ugu waaweyn ee ku gedaaman horumarka Somaliland.
Munaasibadda daah-furka dalladda Sahamiye oo ku qabsoontay magaalada Hargeysa, waxa ka qayb-galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici, Aasaasaha Shirkadda Worldremit, Wasiirro iyo masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda, Xisbiyada Mucaaadka, Xildhibaanno, Aqoonyahan, Dhalinyaro iyo marti-sharaf kale.
Ganacsade Ismaaciil Axmed ayaa ballan-qaaday inuu mashaariicda Dalladu fulinayso ku maalgelin doono lacag dhan $500 milyan oo isugu jira hantidiisa iyo lacago kale maalgeshi 10-ka sanno ee socda.
“Tobanka sano ee soo socda, hamigeygu waxa weeye inaan inaan ku bixiyo $ 500 milyan oo ka mid ah hantidayda iyo maalgashiyada barnaamijyada horumarinta ee diirada lagu saarayo Somalilandm,” sidaas ayuu yidhi Ismaaciil Axmed oo hadal ka jeediyey munaasibadda.
Dalladda Sahamiye oo xarunteedu noqonayso magaalooyinka London iyo Hargeysa, waxa wax-qabadkeeda diiradda lagu saari doonaa hirgelinta mashaariic lagu horumarinayo tacliinta, Caafimaadka iyo kaabayaasha Dhaqaalaha ee guud ahaan gobollada Somaliland. Waxa la qorsheeyey inay dalladu mashaariicaha horumarineed ee dhinaca waxbarashada ku taageerto in ka badan 1 milyan oo dhalinyaro iyo carruur isugu jira si ay u helaan waxbarasho ku filan isla markaana kor loo qaado boqolkiiba 50 heerka Dadka waxbartay ee Somaliland oo xilligan lagu qiyaaso boqolkiiba 45 iyadoo la gaadhsiinayo boqolkiiba 90 oo ah yoolka loo asteeyey in la gaadho sannadka 2023-ka.
vice president Saylici speaking at the launching ceremony of the foundation
Ganacsade Ismaaciil Axmed oo ka hadlayey sababaha ku dhaliyey hirgelinta Dalladda Sahamiye, waxa uu yidhi, “Somaliland waa Qaran iskii isku dhisay iyadoon caawin dibadda laga helin, waxay hirgeliyeen farsamo tekhnolaji iyo hal-abuur ganacsi si ay u gaadhaan horumar aan marna laga fikirin inay suurtogal tahay. Sidaas oo ay tahay haddana Somaliland waxay wali wejahaysaa caqabado xagga horumarka ah oo u baahan inay helaan maalgeshi si loo hirgeliyo koboc dhaqaale, adeegyo caafimaad oo wanaagsan iyo horumar.” Sidaas waxa yidhi Ismaaciil Axmed oo munaasibadda ka hadlay.
“Waxaanu aaminsanahay inay jiraan fursado bannaan oo saamayn la taaban karo oo macno leh ku yeelan kara nolosha dadka Rejada iyo hamiga leh iyo ganacsatada reer Somaliland ee saamaynta ballaadhan ee togan ku leh mustaqbalka dalka iyo gobolkaba,” ayuu yidhi Ismaaciil.
Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo munaasibadda ka hadlay, ayaa u mahadceliyay ganacsadahaas, waxaanuu sheegay in tahay talaabo fiican oo uu dalkisa iyo dadkiisaba waxa ku taray.
Barnaamijka wax-qabadka Sahamiye Foundation, ayaa noqonaya mashruucii ugu ballaadhnaa ee samafal ah ee lagaga dhawaaqo gudaha Somaliland, kaas oo waxtar ballaadhan ka geysanaya sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha la taaban karo ee gedaaman hirgelinta horumar taabba-gal ah oo ka tisqaada dalka